Ipa Fresnel Lens, Yakatungamira Fresnel Mwenje, Fresnel Mwenje Kubva China Mugadziri
Tsanangudzo:Fresnel Lens,Akatungamira Fresnel Mwenje,Chiedza cheFresnel,Fresnel Yakatarisa,,
 HomeProductsFresnel Lens
Fresnel Lens (Total 24 Products)
Zvigadzirwa zve Fresnel Lens , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Fresnel Lens , Akatungamira Fresnel Mwenje vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Chiedza cheFresnel R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
812.8mm Saizi 890mm FL Fresnel Lens
310mm FL350 Fresnel Lens
300 x 150mm PMMA Linear Fresnel Lens
200 x 35mm PMMA Linear Fresnel Lens
600 x 150mm PMMA Linear Fresnel Lens
750 x 50 mm PMMA Linear Fresnel Lens
750 x 40 mm PMMA Linear Fresnel Lens
PMMA inobhururuka ziso fresnel lens
510mm Yakajeka Kureba Spot PMMA Fresnel Lens
100mmm x 100mm FL120mm Fresnel Lens
200 x 20mm PMMA Linear Fresnel Lens
200 x 100mm PMMA Linear Fresnel Lens
800 x 70mm Linear Fresnel lens
800 x 10mm PMMA Linear Fresnel Lens
10mm Saizi 700mm FL PMMA Fresnel Lens
300 x 50mm PMMA Linear Fresnel Lens
Fresnel lens inosimudzira lens
Wide angle fresnel lens
Fresnel lens inoshandiswa mune yekuratidzira system, basa rayo ndere kukomberedza mwenje uye kutarisisa mwenje. Iyo Fresnel lens inoshandiswa muprojekita ndeyekuvandudza kugadzirisa, kujekesa, uye kupenya kweprojekita purojekiti. Iyo tambo inodzika...
Packaging: Wooden Case Apex
Kupa Mazano: 3000 pieces per month
Inofananidzwa neyakajairika idenderedzwa lenzi, iyo Fresnel lens neiyo lens yakakamurwa kuita akateedzana eakakomberedza madenderedzwa theoretically isingagumi nhamba yemitsetse (kureva., iyo Fresnel zone) kuti uwane yakafanana optical athari, uku...
Fresnel lenses inowanzo kugadzirwa nezvinhu zvepurasitiki. Rutivi rumwe rwelenzi rwakatsetseka, uye rumwe rutivi rwunopiswa nemidenderedzwa yakatenderedza kubva kudiki kusvika kune huru. Mavara aro anoenderana nekupindirwa kwechiedza, uye nehukama...
Linear Fresnel lenses akapetana mairi lens anonamira kana anoparadzira mwenje munzira yakatwasuka. Ivo akakodzera kupatsanura mitsara mwenje sosi kana yekutsemura kuunganidzwa. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mumitsara mwenje manyuko. Linear fresnel...
Iyo inobhururuka ziso Fresnel lens (micro-array fresnel lens) ndiyo lenzi rinoshandiswa kushandura mwenje kuti mwenje iite seyunifomu uye kuenzanisa kuburitsa kwechiedza neiyo LED. Iyo micro-array lens inoshandiswa muiyo mwenje senzvimbo yeUN kuita...
Nekuda kwekuzivikanwa kwemasimba emagetsi emagetsi emagetsi, kushandiswa kweimwe chete kana akati wandei maLED sechiedza, Fresnel lens uye micro-array lenzi inosanganiswa neyeimwe mwenje mwenje wechiedza, ichitsiva akawanda maUSS sechiedza sosi...
Linear Fresnel lenses akapetana mairi lens anonamira kana anoparadzira mwenje munzira yakatwasuka. Ivo akakodzera kupatsanura mitsara mwenje sosi kana yekutsemura kuunganidza. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mumitsara mwenje manyuko. Linear fresnel...
Iko kushoma kwekukora kweiyo Fresnel yekukudza yakaitwa yePVC inogona kuva pakati pe0.45mm ~ 0.90mm. Girazi rekusimudzira-rekumusoro-girazi rinogadzirwa nekambani yedu rinogadzirwa uchishandisa chirevo cheFresnel lens. Inoshandiswa zvakanyanya...
Iyo Fresnel yakafara angle lens inoshandisa yakasarudzika FRESNEL lens tekinoroji kuona zvipingaidzo munzvimbo dzaisimboonekwa dzemapofu uye kuwedzera kumashure kwekutarisa renji. Kushanda: Reflective Fresnel wide-angle lens inoshandiswa zvakanyanya...
China Fresnel Lens Vatengi
Optical windows anoreva chidimbu chemeso ejekerere zvinhu izvo zvinobvumidza mwenje mune yeanoridza chimbo. Idzo zvidimbu zvemagirazi ekuona ane ivhu uye kumeso kwakakwenenzverwa ayo akafanana. Optical windows anoshandiswa kuitira kuchengetedza zvisina kusimba oparesheni yezvinhu mukati memidziyo, ivo vanogamuchirwa kutsaura miviri yemuviri nharaunda vachibvumira mwenje kuti upfuure.
Fresnel Lens Akatungamira Fresnel Mwenje Chiedza cheFresnel Fresnel Yakatarisa Fresnel Lenses